Screen Mirroring - Mobile Connect To TV (Castto) APK Download for Android
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ထင်ဟပ်မျက်နှာပြင် - မိုဘိုင်း Connect ကို TV ကရန် (Castto)
မျက်နှာပြင်ထင်ဟပ်ပေးနေ - တီဗီစေရန်မိုဘိုင်း Connect ကို (Castto) APK ကို
ထင်ဟပ်မျက်နှာပြင်ကိုသင်တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သင်၏စမတ်ဖုန်း mirror ခွင့်ပြုထားတဲ့ technique ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်အလွယ်တကူ (Castto) App ကိုထင်ဟပ်ဒီဖန်သားပြင် Stream ကို အသုံးပြု. ကြီးမားတဲ့ screen ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဂိမ်းအားလုံး, ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်အခြား application ကိုရယူနိုငျပါသညျ။
သင်၏မျက်စိသည်သင်၏အသေးဆယ်လူလာဖုန်းကိုကြည့်ထဲကနေညှစ်နေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကို TV app ကိုရန်ဒီ Cast ကိုမှတဆင့်တီဗီဖန်သားပြင်မှသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတို့သည်ကြီးစွာသောမြင်ကွင်းကြီးမှာဖုန်းကိုအတှေ့အကွုံရလိမ့်မည်!
သင့် TV ပေါ်တွင်သင်၏မိုဘိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင် mirroring သငျသညျ, တစ်ဦးမကြာသေးခင်ကခရီးစဉ်ကနေဓါတ်ပုံတွေကိုချွတ်ဖေါ်ပြခြင်းဂိမ်းကစားခြင်းသို့မဟုတ်တစ်သရုပ်ပြပေးခြင်းနေတဲ့အခါမှာအသုံးဝင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ Screen ကို App ကိုထင်ဟပ်နှင့်အတူ, သငျသညျကို TV screen ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းရဲ့ screen ကိုပွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
App ကိုထင်ဟပ်ဤသည်ဖန်သားပြင်သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ device ကိုသင့် TV ကိုချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည်ကို Mobile Connect ကို TV ကရန် (Castto) App ကိုသင့်ရဲ့ဒေတာ, ဖိုင်တွေနဲ့ application များကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လုံခြုံတဲ့ချိတ်ဆက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ မျက်နှာပြင် Stream ထင်ဟပ်ပေးနေ, ရိုးရှင်းသောသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပြီးအရေးအကြီးဆုံးကတော့အခမဲ့ app ကိုပါ!
တီဗီဤ Connect ကိုဖုန်း (Castto) App ကိုနှင့်အတူသငျသညျန့်အသတ်မရှိဘဲဖုန်းမှ TV သို့စီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ချက်ချင်းသင့် TV မှရုပ်ရှင်, ဂီတနှင့်ဓာတ်ပုံများစီးဆင်းကူညီပေးသည်! တီဗီရန်ဤသည် Cast ကို (Castto) App ကိုဟာ android user တွေအတွက် app များကိုထင်ဟပ်ကိုအကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင်၏တစ်ခုဖြစ်သည်။
တီဗီရန်ကာစ်တ်တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာရုပ်ရှင်များ, ဗီဒီယိုများ, access ကိုဓာတ်ပုံများနှင့် app များကို streaming များအတွက်အသုံးဝင်သည်။ သင်အလွယ်တကူကြိုးမဲ့သင့် TV နှင့်သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးတီဗီရှိုးများနှင့်စီးရီးရှာဖွေပြီးအလွယ်တကူသင့် TV screen ပေါ်မှာအချိန်မရွေးသူတို့ကိုစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်။
သင့် TV သို့မဟုတ် tablet တွင်ဗွီဒီယိုကြည့်သင့်ရဲ့ကြီးမားတဲ့တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်သူတို့အားရုပ်ရှင်များ Streaming, ကြီးသောပါသလဲ ပိုကောင်းသေး။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ TV ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုကြည့်ရှုရန် app ကိုထင်ဟပ်ကိုအကောင်းဆုံးမျက်နှာပြင် Stream ပါပဲ။ သငျသညျ HDMI မရှိရင်တီဗီမှဖုန်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျှင်ဤသည်အကောင်းဆုံးမိုဘိုင်း Connect ကိုရန်တီဗီ (Castto) App ဖြစ်ပါတယ်, သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်!
Little ကစမတ်ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်ဖန်သားပြင်ပြေးကောင်းသောသော်လည်း, သင်သည်သင်၏မိသားစုဧရိယာထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဒါဆိုဘာလို့မယ့်အစားသင့် TV ရဲ့အများကြီးပိုကြီးတဲ့ screen ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်မဟုတ်လော ယခုရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူသင့်ရဲ့ဖုန်း screen ကိုမျှဝေခြင်းတီဗီဤ Connect ကိုဖုန်းနှင့်အတူလွယ်ကူသည် (Castto) App ကို။
သငျသညျကြောက်မက်ဘွယ်အတှေ့အကွုံအရပိုမိုကြီးမားဖန်သားပြင်သို့သင့်ရဲ့သေးငယ်တဲ့ဖန်သားပြင် ချ. အဘို့အကြီးမြတ်ဆုံး Apps ကပရှာဖွေငြီးငွေ့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ဒီမှာတီဗီရန်အကောင်းဆုံးနှင့်အများဆုံးအသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ Connect ကိုဖုန်း (Castto) App ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်အားလုံးသင့်ရဲ့ smartphone / tablet တစ်လုံးနှင့်သင့်တီဗီဒီမိုဘိုင်း Connect ကိုရန်တီဗီ App ကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ဖို့အဘို့အလို့ငှာတူညီ WIFI ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။
သင့် TV မှသင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမျက်နှာပြင်အားပြသရန်ဖိုအဆင့်ကိုလိုက်နာပါ:
သင့် TV နှင့်သင့်ဖုန်းကိုအတူတူ wifi network ကိုချိတ်ဆက်နေကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ 1-
Miracast Display ကိုသင့်ရဲ့ TV ပေါ်မှာ Enable 2-
ကြိုးမဲ့ Dispaly option ကိုသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာ Enable 3-
ကို Select လုပ်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင့် TV ကိုရှေးခယျြ 4-
ထင်ဟပ်မျက်နှာပြင်အားလုံး Android ထုတ်ကုန်နှင့် Android ဗားရှင်းကထောက်ခံသည်။ သင်သည်သင်၏စက်ကိရိယာနှင့်မဆိုပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရပါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစား!
မကောင်းတဲ့မှတ်ချက်ထားခဲ့ဖို့ကြိုတင်မဆိုပြဿနာသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုချက်အတွက် contact@soomapps.com မှာအမေရိကန်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ကျနော်တို့သင်သည်မည်သည့်အကူအညီပေးကျေနပ်ပါလိမ့်မယ်!
ထင်ဟပ်မျက်နှာပြင် - မိုဘိုင်း Connect ကို TV ကရန် (Castto)
3.34 ကို MB